Ciidamada NISA oo gacanta ku soo dhigay sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab – Radio Daljir
Ciidamada NISA oo gacanta ku soo dhigay sarkaal sare oo ka tirsan Al-shabaab
Abriil 24, 2019 8:20 b 0
Kadib howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho, Ciidanka amniga ayaa waxaa ay ku guuleysteen in ay gacanta kusoo dhigaaan dhagarqabe Amniyaatka Alshabaab ah oo ku sugnaa degmada Shibis ee magaalada Muqdisho.
War ka soo baxay hay”adda Nabadsugidda iyo sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa lagu faah fahiyay howlgalkaasi lagu soo qabtay dhagar qabahan oo ku tirsanaa Alshabaab.
Eedaysanahan oo ka howlgali jiray degmooyinka Yaaqshid & Heliwaa ayaa lagu tuhmayaa inuu ka dambeeyay dilal qorshaysan oo dad shacab ah loo gaysta.sida lagu sheegay qoraal la soo dhigay Barta Twitter-ka NISA
Dhanka kale Hay’adda NISA ayaa qoraal la soo baxay waxaa lagu sheegay in Horjooge Aadan Goobe oo isu soo dhiibay Ciidan uu soo gaaray magaalada Muqdisho, ee caasimaadad Soomaaliya,kaasi oo horey u ahaa xubin sare oo ka tirsanayd Alshabaab.
“Waxaa Muqdisho soo gaaray Aadan Coobe, oo ahaa sargaal sare oo muddo dheer ka tirsanaa argagixisada Alshabab, kadib markuu ka dalbaday NISA inay u sahasho sidii uu uga soo goosan lahaa”. Ayaa lagu yiri qoraalkaasi ka soo baxay nabadsugidda Qaranka.
Muddooyinkii ugu dambeyeye waxaa sii kordhayay tirade horjoogayaasha iyo maleeshiyaadka isku soo dhiiba dowladda,kadib markii ay sii kordheen howlgalada lagu baacsanayo,iyadoo qaarna ay fahmeen fikirka qaldan oo ay ka dhaadhiciyeen alshabaab.
Ri’ dhali wayday iyo Wasaaradda Xannaanada Xoolaha oo ku jawaabtay in aysan lahayn qalab iyo goob lagu daweeyo toona (daawo)
Qarax ka dhacay magaalada Bosaaso